इन्स्टाग्राम शपिंग अब स्पेनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राम व्यवसायको क्षेत्रमा प्रमुख सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक हो: यसले उत्तम प्रदर्शन उत्पादनको रूपमा कार्य गर्दछ। थप रूपमा, यो उत्पादन प्रस्ताव गर्न उत्तम स्थान हो। जहाँसम्म, लामो समयको लागि आवश्यक भएको कुरा हाम्रो प्रकाशनहरूमा सीधा लिंकहरू राख्न सक्षम हुनुपर्दछ ताकि सम्भावित खरीदारहरू विभिन्न वेबसाइटहरूको खरीद लि directly्कमा सिधा जान सक्छन्।
करीव एक बर्ष पहिले, इन्स्टाग्राम फीचर «Instagram शपिंग» एउटा नयाँ कार्यक्षमता जुन केवल थोरै बजारमा उपलब्ध थियो। र त्यो फोकस गरिएको थियो, केवल र विशेष रूपमा व्यापार विश्वमा। केहि दिन अघि सामाजिक नेटवर्क जुन फेसबुकको अंश हो, गर्‍यो विज्ञापन que Instagram शपिंग अधिक देशहरूमा फैलियो। र ती मध्ये एक स्पेन हो।
1 इन्स्टाग्राम शपिंग: तपाईंको इन्स्टाग्राम व्यवसाय प्रोफाइल लाई जीवनमा ल्याउने नयाँ तरिका
2 तपाईंलाई के आवश्यक छ वा कुन नयाँ आवश्यकताहरू इन्स्टाग्रामले यो नयाँ प्रकार्य प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछ?
3 यदि म पहिले नै «Ok» दिएको छु भने म कसरी समारोह सक्रिय गर्ने?
4 म पहिले नै पंजीकृत छु। म इन्स्टाग्राम शपिंगको साथ के पाउँछु?
इन्स्टाग्राम शपिंग: तपाईंको इन्स्टाग्राम व्यवसाय प्रोफाइल लाई जीवनमा ल्याउने नयाँ तरिका
यो इन्स्टाग्राम शपिंग के हो? ठिक छ, हामीले राम्ररी वर्णन गरेका छौं: यो उत्तम मार्ग हो तपाईंको फोटोहरूमा देखाइएका उत्पादनहरूका खरीदहरूमा प्रत्यक्ष लिंक राख्नुहोस्। तर यो धेरै सौन्दर्य तरिकामा गरिन्छ, साथ साथै इम्प्लान्ट गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यस्तै गरी, Instagram शपिंग सबै कम्पनीहरूको लागि खुला छ "कहिले व्यक्तिगत प्रोफाइलहरू।" र लि place्कहरू राख्न सक्षम हुनका लागि निश्चित संख्यामा अनुयायीहरूको पुग्न आवश्यक पर्दैन किनकि यो इन्स्टाग्राम कथाहरूमा घटित हुन्छ जसमा तपाईंसँग कम्तिमा १०,००० अनुयायीहरू वा १०k हुनुपर्दछ।
तपाईंलाई के आवश्यक छ वा कुन नयाँ आवश्यकताहरू इन्स्टाग्रामले यो नयाँ प्रकार्य प्रयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछ?
हामीले तपाईंलाई भनेको छै कि, इन्स्टाग्राम शपिंग व्यापार प्रोफाइलहरूमा खुला छ; व्यक्तिगत प्रोफाइलहरू स्वीकार गरिने छैन। यदि यो तपाईंको मामला हो भने कर्पोरेटमा जानुहोस्। यस बीच, तपाईंको खातामा इन्स्टाग्रामले यो प्रकार्य सक्रिय गर्नु अघि, तपाईंले केही आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ जुन हामी तल वर्णन गर्दछौं:
तपाईंको व्यवसायले भौतिक उत्पादनहरू बेच्नु पर्छ जुन भेटिन्छ व्यापारीहरूको लागि सम्झौता र व्यापार नीतिहरु
तपाईंको कम्पनी भित्र हुनुपर्छ संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन वा ब्राजील
तपाईंले आफ्नो इन्स्टाग्राम खातालाई कम्पनी प्रोफाइलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ
कम्पनी प्रोफाइल एक फेसबुक क्याटलगमा जोडिएको हुनुपर्दछ, जुन तपाईं सिर्जना र शिपिफाइ र बिगकामर्स प्लेटफर्महरू मार्फत ब्यवसायिक प्रबन्धकमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ, वा सीधा तपाईंको कम्पनीको फेसबुक पृष्ठमा।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ हामीले यी सबै पोइन्टहरू भेट्नुभयो जुन हामीले विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभयो भने, तपाइँ केवल इन्स्टाग्रामलाई तपाइँको खातामा यो प्रकार्य सक्रिय पार्न भन्नुहोस्। स्पष्ट रूपमा, सामाजिक नेटवर्क दर्ता गर्न केहि दिन लाग्छ Instagram शपिंग.
यदि म पहिले नै «Ok» दिएको छु भने म कसरी समारोह सक्रिय गर्ने?
तपाईले इन्स्टाग्रामबाट कुनै सन्देश प्राप्त गर्नुहुने छैन, अवलोकन गर्न तपाई एक हुनै पर्छ यदि तपाईले आवश्यकताहरु पूरा गरेको छ कि छैन। यदि हो भने, पछ्याउनको लागि चरणहरू ती हुन् जुन कम्पनी आफैंले यसको समर्थन पृष्ठहरूमा छोड्छ:
तपाईंको प्रोफाइलमा जान व्यक्ति सिल्हूट जस्तो आकारको माथिल्लो बायाँ आइकन ट्याप गर्नुहोस्
सतर्कता छुनुहोस् सुरु गर्नुहोस् तपाइँको प्रोफाइल को शीर्ष मा
यदि तपाईं माथिको छविमा सतर्कता देख्नुहुन्न भने, सेटिंग्स व्हील ट्याप गर्नुहोस् तपाइँको प्रोफाइल को मुख्य स्क्रीन मा
टच खरीदारी कार्ट
जारी ट्याप गर्नुहोस्
चयन गर्नुहोस् उत्पादन क्याटलग जुन तपाईं आफ्नो कम्पनी प्रोफाइलमा जडान गर्न चाहानुहुन्छ
म पहिले नै पंजीकृत छु। म इन्स्टाग्राम शपिंगको साथ के पाउँछु?
अब देखि तपाईं सक्षम हुनुहुनेछ छविहरूका प्रत्येक तत्वलाई ट्याग गर्न सक्षम गर्नुहोस् जुन तपाईंले इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नुभयो। र हो, जब तपाईं प्रकाशनमा देखा पर्नुहुने व्यक्तिलाई ट्याग गर्नुहुन्छ, यस अवस्थामा हामी तिनीहरूको मूल्य, नामको जानकारीको साथ ट्याग गर्नेछौं र हामी लि link्क राख्नेछौं जुन हाम्रो बिक्री पृष्ठमा लैजान्छ, विशेष रूपमा उत्पादन पृष्ठमा।
अर्को तर्फ, यी लेबलहरू स्क्रिनमा देखा पर्नेछ जब प्रयोगकर्ताले फोटोमा क्लिक गर्दछ। त्यो ठ्याक्कै क्षणमा हामीले राखेका बिभिन्न लेबलहरू देखा पर्नेछन्। थप रूपमा, छविहरूको पहिचान गर्न यी खरीद लेबलहरू छन् आइकन शपिंग टोकरीमा देखा पर्नेछ.
यसैबीच, इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ अधिकतम products उत्पादनहरू ट्याग गर्न सक्दछ यदि तपाईंको पोष्टमा एकल छवि समावेश गर्दछ। र अधिकतम २० लेबलहरू प्रकाशनमा धेरै फोटोग्राफहरू समावेश भएमा। थप रूपमा, यो नयाँ प्रकाशनहरूमा साथै अघिल्लो प्रकाशितहरूमा लागू गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, तपाईंलाई चेतावनी पनि दुबै मुद्रा र भाषा जुन लेबलमा प्रदर्शित हुनेछ त्यो एक हो जुन तपाईंको लिंक गरिएको स्टोरको सूचीमा देखा पर्दछ। तसर्थ, यस कदम लिनु अघि, प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुहोस्। यसले तपाइँलाई तपाइँको लक्षित दर्शकहरूको बारेमा बढी सिक्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » इन्स्टाग्राम शपिंग अब स्पेनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ